မယ့်ကိုး: "သူ့ အတွက် လက်ဆောင် "
"သူ့ အတွက် လက်ဆောင် "
မင်းကို ပြောပြချင်လွန်းတဲ့ စကားစုတွေလေ...
အရှက်သည်းကာ အနေခက်နေလည်း မင်းသိစေချင်လွန်းလှတယ်။
အမြဲတမ်း မင်းကို ရယ်မော နောက်ပြောင်နေခဲ့လည်း လေးနက်စကားဆိုချင်သေးတာမို့ ကျေးဇူးပြုပြီး နားဆင်... ကြိုးစားပြီးနားလည်ပေးပါကွယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ်တိုင်သိနေရဲ့။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ချစ်ဖို့ကျွန်မမှာ သတ္တိများစွာ လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ အရည်အသွေးတွေ နိမ့်နေပါသေးတယ်။ တကယ်လည်း သူနဲ့တွေ့စဉ်ခဏမှာ ယုံကြည်မှုတွေ မရှိခဲ့ပါ။ပူပန်မှုတွေ အပြည့်နဲ့ စိုးရိမ်လို့မဆုံးနိုင်ခဲ့။
ဒါပေမယ့် ရွေ့ လျားသွားတဲ့ အချိန်တွေကို အတူအတွ ဖြတ်ကျော်ရင်း ကျွန်မဘေးမှာ အမြဲတစေဂရုတစိုက် ရှိခဲ့တယ်နော်။ မင်းရဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ အချစ်တွေအတွက် အမြဲပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အခု ကျွန်မ ရင့်ကျက်ဖို ကြိုးစားနေပြီလေ။ မင်းကို ကြည့်မိတဲ့အခါတိုင်း ရင့်ကျက်မှုတွေ ပိုလို့တိုးလာနေ။မင်းလေး ကျွန်မကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ အချိန်လေးမှာတင် စတင် ရင့်ကျက်တော့မှာ။
ဒါပေမယ့် ရင့်ကျက်သူရဲ့ အချစ်ရနံ့ကတော့ ဘယ်တော့မှ ပြယ်လွင့်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။။
ခုချိန်ကစ အသစ်တဖန်မွေးဖွားဖို့ ခြေတစ်လှမ်းစနေပြီ ဖြစ်ပေမယ့် မင်းလေးကို ယုံကြည်တဲ့ အကြည့်ငေးလေးတွေကတော့ ဘယ်တော့မှ ပြောင်းလဲမှာ မဟုတ်ပါဘူးကွယ်။ သူလည်း သိနေလိမ့်။အနားမှာ ရှိပေးတဲ့ အတွက် အချိန်တိုင်း ကျေးဇူးတင်။
ဒါပေမယ့်နှစ်သက်တယ် ။ ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ စကားစုတွေကို ရှက်စိတ်နဲ့ စိုးထိတ်ကာ ဘယ်လိုမှ ပြောမထွက်နိုင်ခဲ့ပါ။
ဒီလိုလေးနက်ရမှာ ကြောက်နေတာမို့ ရယ်စရာအဖြစ် ပေါ့ပါးဟန်ဆောင်ခဲ့တာ မှားခြဲ့ပီလားကွယ်။မင်းရင်ကို ထိခိုက်နာကျင်စေခဲ့သလား။
အချိန်တွေ ပြိုကျ။ ကမ္ဘာကြီးလည်း ရွေ့လျားပြောင်းလဲနေပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ အနားမှာ အစဉ်ရပ်တည်ကာကွယ်ပေးနေတဲ့ မင်းလေးအတွက် ကျွန်မ တစ်စထက် တစ်စ ရင့်ကျက်ပါတော့မယ်။
ဒါပေမယ့် မင်းရဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ အချစ်တစ်ခု မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။
ကျွန်မ ရင့်ကျက်လာနေပြီ ။
ကျေးဇူးပြုပြီး စောင့်ကြည့်ပေးပါကွယ်။ကျွန်မရဲ့ ပြောင်းလဲခြင်း အခုစနေပြီ။
“ကျွန်မ ရင့်ကျက်လာနေပြီ။ မင်း ရှင်သန်ပျော်ရွှင်စေဖို့ အခုကစ ကြိုးစားသွားမှာ။”
အရှက်သည်းကာ အနေခက်နေလည်း မင်းသိစေချင်လွန်းလှတယ်။ ။
Hwangbo 황보 - Mature 성숙
Credits to Chonsa for the translation.
Artist : Hwang Bo (황보)
Album : Gift For Him (Digital Single)
Release : 2008.07.03
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 8/24/2008 10:02:00 PM
I've been here everyday except my travel times n i also saw yr ( old ) stories in thanlwin. what should i say more !!!!!! actually wanna say more n more but ...... keep waitin yr ( real new ) postssssssssss !
19/10/08 9:27 AM
ကျွန်မ၇ဲ့စာတွေကို စောင့်ဖတ်တဲ့သူ မရှ်ိဘူးထင်လို့တင်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေမိတာပါ...ဖတ်ရှူပေးတယ်ဆို၇င် ကြိုးစားပြီးေ၇းပါ့မယ်...
အင်း... စဖတ်ဖတ်ချင်းကို သီချင်းတစ်ပုဒ် ကြားရသလိုပဲ..။
ချစ်သူအတွက် ရင့်ကျက်အောင်ကြိုးစားချင်စိတ် ပေါ်လာတဲ့အကြောင်း...။
ခက်တာက ရင့်ကျက်ဖို့က ဖြတ်လမ်းမရှိတာပဲ...။
မူရင်းသီချင်းစာသား မသိပေမဲ့ ဘာသာပြန် ကောင်းတယ်..။
28/11/09 1:17 AM